Searchmetrics: Sehatra iray, Sehatra SEO tarihin'ny data
Alakamisy, Aprily 21, 2016 Zoma, Aprily 22, 2016 Douglas Karr
Ampiasaina am-polony fitaovana SEO miaraka amin'ny tondra-drano bebe kokoa isam-bolana. Ny olana amin'ny ankamaroan'ireny fitaovana ireny dia ny fifantohan'izy ireo amin'ny metrika izay mety nanan-danja taona maro lasa izay, saingy tsy izany intsony. Searchmetrics dia orinasa iray, sehatra SEO entin'ny data izay manohy mivoatra ary manome valiny ho an'ny mpanjifany - iraisam-pirenena. Ny index an'ny milina fikarohana ankehitriny dia manome toerana haingana kokoa hatrany sy haingana kokoa noho ny an'ireo teo alohany. Nivoatra izy ireo
Mangataka ny fidiranao amin'ny fitaovana SEO ho an'ny tatitry ny mpandalina
Alakamisy Febroary 12, 2015 Alakamisy Febroary 12, 2015 Douglas Karr
Niasa mafy izahay vao tsy ela akory izay, niaraka tamin'ny tatitra momba ny fanjakana, ny tantara ary ny fomba fanao tsara indrindra momba ny milina fikarohana. Nipoaka ny indostria nandritra ny taona maro fa nivadika ambony ambany noho ny mpivady farany. Mino izahay fa mbola misy fisafotofotoana be ihany amin'ny orinasa momba izay mandeha, izay tsy mandeha, iza no hifampidinihana ary inona no fitaovana misy. Fitaovana ho manan-danja amin'ny antsika